Tempolin'i Kelania Raja Maha Vihara - Kelaniya Raja Maha Vihara ~ Journey-Assist - Tempolin'i Kelaniya
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Tempolin'i Kelania Raja Maha Vihara - Kelaniya Raja Maha Vihara
Tempolin'i Kelania Raja Maha Vihara - Kelaniya Raja Maha Vihara. Colombo
24 Desambra, 2019
Famaritana ny tempolin'i Kelania Raj Maha Vihara
Frescoes ao amin'ny tempoly taloha sy vaovao
Festival Durutu Perahera
Stupa an'i Kelania Raj Maha Vihara
Aiza ary ahoana no hahazoana ny tempolin'i Kelania
Fampahalalana mifandray. Ny maodelin'ny fomba fiasan'ny tempoly. vidin'ny
Tempoly eo amin'ny sarintany
Hevitra ho an'ny Tempolin'i Kelania
Io zavatra marisika Sinhala fombafomba io dia noforonina tamin'ny taonjato faha-3. BC. f. Ny tempoly dia voaravaka frescoes mahafinaritra izay mamorona angano maro isan-karazany momba ny Buddha, indrindra ny momba ny fitsidihany ny toerana misy ity tempoly ity ankehitriny. Kelania Raja Maha Vihara dia tafiditra ao anatin'ny fitsangatsanganana fizahan-tany atao any Colombo.
Ity dia toeram-pitsaboana feno iray manontolo, izay ahitana stupa lehibe, tempoly antitra, tempoly vaovao ary fonenan'ny moanina. Ny tena mahaliana dia ny fanangonana sary hoso-doko taloha, izay voatahiry ao amin'ny efitrano taloha tempoly, santionany amin'ny sary hosodoko mahazatra (voatahiry ao amin'ny tempoly vaovao), sarivongana Buddha iray mampahatsiahy ary sary sokitra hafa.
Hazo Bodhi ao amin'ny Tempolin'i Kelania
Eo amin'ny sisiny ankavanan'ny tempolin'ny tempoly, eo an-tokotaniny, misy hazo Bodhi masina maniry, mitovy amin'ilay iray izay nahazoan'ny Buddha ny fahazavana. Ireo izay maniry ny ho akaikin'ity hazo ity, na ny ranony aza dia tena mila miaro tena andalana olona maniry.
Nandeha nankany amin'ny hazo Bodhi tao amin'ny Tempolin'i Kelania
Frescoes ao amin'ny tempolin'i Kelania taloha sy vaovao
Ny ao anatiny amin'ny tempoliny taloha dia manaitra ny hakanton'ny frescoes izay mampiseho ny fahitana ny fiaviany sy ny fananganana Buddhism any Sri Lanka.
Frescoes amin'ny tempolin'i Kelania taloha
Ny takelaka efatra no maneho ny hazo fiainana efatra maneho ny axis an'izao rehetra izao. Ny valin-drihana dia voaravaka ny lanitra aseho amin'ny planeta, andriamanitra ary famantarana zodiaka, ho tandindon'ny dingana roa ambin'ny folo amin'ny hetsika fiodinan'ny rivodoza.
Note. fa Horoscope dia manan-danja lehibe eo amin'ny fiainan'ny Sri Lankans. Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba izany amin'ny lahatsoratra momba Kolontsaina Sri Lanka.
Ny tempoly vaovao dia voaravaka sary hoso-doko amin'ny fomba kaozy Indiana maneho ny andriamanitra Indiana manidina ny tantaran'ny fahatongavan'ilay Tooth Relic any Sri Lanka.
Durutu Perahera Festival natokana ho amin'ny fitsidihan-tsarintany ny Buddha ny taonjato 25 lasa izay.
Isan-taona amin'ny volana Janoary dia misy ny fety Durutu Peraheranatokana ho an'ny fitsidihan'ny Bouddha amin'ity fitoerana ity. Mandritra izany fotoana izany, ny dingana manentana maro be dia be izay handraisan'ireo mpanao mozika matihanina, mpanao ody ary mpandihy, ary koa ny elefanta iray manontolo.
Araka ny angano sy angano, ny toerana misy ny tempoly ankehitriny 500 BC dia notsidihan'ny Bouddha ny tenany, niaraka tamin'ny antsasaky ny arhats (arhats no zavaboary avo lenta indrindra). Ny fitoriana ny fampianarana bodista dia ny tanjon'ny fitsidihany.
Ny zava-nitranga dia tamin'izany fotoana izany dia nisy ady nifanaovan'i Kelania, notohanan'i India, ary Ravana, notohanan'i Lanka. Ary tena marina ny fampianarana nentin'i Buddha tamin'ity vanim-potoana mafana ity izay nandray anjara tamin'ny fametrahana ny fifandirana am-pilaminana ny fifandirana.
Taorian'izany dia nisy stupa lehibe antsoina hoe Kelania Raja Maha Vihara
Stupa of Kelania
Nanomboka teo dia rava mihoatra ny indray mandeha ny trano masina notontosain'ny mpanafika avy any India. Nefa naverina amin'ny laoniny izy io ary ny taonjato maro dia mbola nijanona teo amin'ny tsangambato lehibe indrindra ao Sri Lanka sy ny Buddhism. Hatramin'izao dia notanterahina hatramin'izao ny fivahiniana ara-pivavahana avy any Kambodza, Myanmar (Burma) ary Thailand.
Ny fotoana farany tamin'ny faran'ny portogey dia rava ny tempoly tamin'ny 1510, ary hatramin'izay dia taonjato maro no lasa talohan'ny nanamboarana ny toerana masina tamin'ny 1851. Ary 95 taona taty aoriana, tamin'ny 1946, dia natsangana teo akaikin'ny trano ilay antsoina hoe tempoly vaovao.
Eo ankavanan'ny fidirana amin'ny lapan'ny tempoly dia stupa fotsy lehibe (27 metatra ny haavony), naorina tamin'ireny andro ireny rehefa nahemotra ny ady noho ny fampianaran'ny Bouddha.
Ao anatin'ny stupa dia seza fiandrianana nomen'ny Mpanjaka Buddha, izay nitoriany ny fampianarany.
Ny stupa dia misy fidirana efatra amin'ny teboka kardinaly, saingy indrisy, voarara ny fidirana aminy.
Aiza ny tempolin'i Kelania Raja Maha Vihara
Ny kompana Kelania Raja Maha Wahira dia 10 km avaratra atsinanan'ny renivohitr'i Sri Lanka, Colombo. Ankoatra ny hetra sy ny fitaterana tsy miankina, afaka miditra eto amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana ihany koa ianao. 235miainga ho any Colombo avy amin'ny gara fitateram-bahoaka Bastian mawatha.
Misokatra ho an'ny mpitsidika ny tempoly manodidina ny famantaranandro
Ny fidirana amin'ny tempoly dia mifanaraka amin'ny alàlan'ny kaody mahazatra ho an'ny fitsidihan'ny tempoly. Tsy misy kiraro sy satroka, misy lohalika misalotra, soroka.
Address: 0710 640 251 - Ven.Deniyaye Pannaloka Buddhharakkhita thera
Tranonkala - http://www.kelaniyatemple.org/
telefaonina: + 94 112 911 505
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/kqEFQbKTAESefWuZA
Tempolin'i Kelania Raj Maha Vihara eo amin'ny sarintany Colombo
Hevitra momba ny Tempolin'i Kelania any Colombo
Ny fijerin'ny tempolin'i Kelania (valin'ny Google)
Raha te handao ny famerenanao ianao na manontany fanontaniana - ampiasao ny taratasy eto ambany